Imisila yenkomo namachashazi |
Ama-Epaulets Ahlukahlukene Wempi
I-Epaulet ucezu lwehlombe lokuhlobisa noma umhlobiso osetshenziswe njengakwi-insignia noma obekwe ngamasosha ezindiza, amabutho empi nezinye izinhlangano. Izipho Ezicwebezelayo ziveza izinsimbi ze-PVC, ezifekethisiwe, ezilukiwe noma ezifakwe embossed namamaki ehlombe ngokusekelwa okuhlukahlukene kokukhetha kwamakhasimende. Okwe-e ...
Amachashazi wangokwezifiso namalebula
Izimagqabhagqabha ezenziwe ngokwezifiso namalebula bekuhlale kungomunye wemikhiqizo yethu ethengisa kakhulu futhi ephelele ngokusetshenziswa kwayo okuhlukahlukene nemiklamo yemfashini. Zisebenza ngezindlela eziningi futhi zingasetshenziswa ezikhwameni, ezicathulweni, izigqoko, amathoyizi, izimoto, ifenisha nezingubo ezibandakanya izingubo zangaphandle, izingubo zangaphansi nokunye. Enye yezinyanga ...
Imisila yenkomo eyenziwe ngekhwalithi eyenziwe ngekhwalithi
I-strap ne-lanyard zivame kakhulu empilweni yethu yansuku zonke, njengezintambo zezintambo zabasebenzi basehhovisi, isitshudeni sesikole ne-ID lanyard yemibukiso yezohwebo, intambo yemithwalo, iribhoni lezindondo, ibhande lezinja namakhola, ibhande elifushane ne-carabiner, umucu wefoni, ibhande lekhamera, Ibhande lezingilazi, ishaja ...
Izinsalela Zenja Ehlala Njalo Namakhola
Izinja zingabangane abathembekile kakhulu babantu futhi kulezi zinsuku imindeni eminingi inenja eyodwa okungenani. Kumnikazi wenja entsha, okumele kube nakho kufaka ukudla kwenja, umbhede onethezekile, ngakho-ke yi-leash. Akunandaba ukuthi inja yakho ineminyaka emingaki noma ingakanani, ukuhamba ngezilwane kubalulekile. Ngakho-ke yo ...
Imisila yenkomo yekhwalithi yangokwezifiso
Imisila yenkomo yekhwalithi ephezulu kufanele kube yinto ongakhetha kuyo kuqala ukuze ubonise amabheji, amathikithi noma amakhadi e-ID emicimbini, emsebenzini nasezinhlanganweni, futhi enye yezinto zokukhangisa ezihamba phambili emhlabeni jikelele. Imisila yenkomo ingabuye isetshenziswe ezinhlelweni eziningi ezifana nesongo, i-bottl ...
Umkhiqizi we-Disney Approved Embroidery Patch
Ngenkambiso (ethandwa kakhulu) kude nokusetshenziswa kwemfashini okusheshayo, isidingo sezinto ezingazodwana nezangempela siye sakhula. Kwesinye isikhathi, lapho ubona amabala amahle efekethisiwe ezindwangu, kufanele umangale ngobuciko bawo obuyinkimbinkimbi. Singumkhiqizi wakho omuhle ...